အဘယ်အရာကိုသင်ဖုန်းကိုဖွင့်မပေးကြပါလျှင်လုပ်ဖို့ - ဖုန်းကို - 2019
ခေတ်သစ်မိုဘိုင်း operating system မြားပျေါတှငျအခွခေံစမတ်ဖုန်း - Android, iOS နဲ့ Windows Mobile ကတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပါဝင်သည်ဖြစ်စေ, နောက်တဖန်မှတဆင့်လုပ်ကြသည်မဟုတ်။ ပြဿနာများဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲနှစ်မျိုးလုံးကိုဖုံးအုပျနိုငျသညျ။
ဘက်ထရီက၎င်း၏အရင်းအမြစ်များကိုဖွင့်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်အခါစမတ်ဖုန်းကိုထိုကိစ္စများတွင်အလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဤကိစ္စကိုသာအဟောင်းတွေကိရိယာများပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ စည်းကမ်းကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ, ရှည်လျားအားသွင်းများအတွက်ဘက်ထရီအတွက်တာဝန်ခံတစ်ဦးလျင်မြန်စွာကျဆင်းသဖြင့်ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းဘက်ထရီ (အဟောင်း device များအတွက်ကိုလည်းများသောအားဖြင့်မှန်) အောက်ဆီဒိုက်စတင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ပျက်မှစတင်လျှင်ဘက်ထရီမီးရှို့မည်တဲ့စွန့်စားမှုရှိသည်အတိုင်း, ကတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖုန်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရသော် သာ. ကောင်း၏။ ရောင်ရမ်းဘက်ထရီပင်ကိုယ်ထည်အောက်မှာအနေဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံမြင်နိုင်သည်။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်စမတ်ဖုန်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာ့ဒ်ဝဲပြဿနာများ၏ဖွင့်, ဒါကြောင့်အိမ်မှာအလွန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည် fix မထားဘူး။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ပြဿနာများ, ၏အမှု၌, ဘက်ထရီကမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်ကတည်းကသူအစဉ်အဆက်ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်သစ်တစ်ခုတဦးတည်းအတူကအစားထိုးရန်မည်, ၏စွန့်ပစ်ခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ပြဿနာတွေ၏ကျန်နှင့်အတူသင်ဆဲရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
ပြဿနာ 1: ဘက်ထရီမှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်မထားဘူး
ကအိမ်မှာအနည်းငယ်လေဖြတ်တညျ့နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, ဤပြဿနာကို, အများဆုံးဗလာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ device ကိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ဘက်ထရီရှိပါတယ်ရှိလျှင်, တစ်ခုခုသင်ယခင်ကအဆိုပါ SIM ကဒ်-card ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ရန်, ဥပမာ, ကကိမ်မင်းထံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြပေမည်။ ဘက်ထရီထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လို, ကောင်းတစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ အများအားဖြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုသိထားပုံဆွဲသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာတစ်နေရာရာမှာဘက်ထရီအမှု၌တည်ရှိသည်ကိုလမ်းပြ။ မဖြစ်လျှင်, အချို့ကိုသင်မော်ဒယ်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသကဲ့သို့, အသားတင်ပေါ်မှာရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
ဘက်ထရီထည့်ခြင်းမပြုမီကဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မည်ရှိရာအသိုက်အာရုံစိုက်ဖို့အကြံပြုသည်။ အဆိုပါ plug ကိုမဆိုလမ်းသည်ပုံပျက်နေသော, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထဲကအချို့ Non-တည်ရှိ၌တည်ရှိ၏ အကယ်. သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုချိုးဖျက်ဖို့အန္တာရာယ်အဖြစ်ကဘက်ထရီထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုဆက်သွယ်ဖို့မ သာ. ကောင်း၏။ ရှားပါးခြွင်းချက်ခုနှစ်တွင်, အသေးစား၏ပုံပျက်သောသည်မှန်လျှင်, သင်သည်ထိုသူတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို fix ရန်ကြိုးစားနိုင်ပါသည်, ထိုအခါမူကားသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဒါလုပ်ပါ။
ပြဿနာ 2: ပါဝါခလုတ်ကိုမှပျက်စီးခြင်း
ဤပြဿနာကိုအစကအရမ်းဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအသုံးပြုဖို့တက်ကြွစွာရှည်လျားရှိသည်, ဒါပေမယ့်ဥပမာချွင်းချက်, ချွတ်ယွင်းကုန်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်အများအားဖြင့်ကဖြစ်ပေါ်နိုင် devices များ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, options နှစ်ခုနေသောခေါင်းစဉ်:
ထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားပါ။ အများစုကတော့ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယကြိုးပမ်းမှုစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်လှည့်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ယခင်ကထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ကြပါလျှင်, လိုအပ်ကြိုးစားမှုများ၏အရေအတွက်သည်အလွန်ကြီးမားလိမ့်မည်
ပြုပြင်ဘို့ပေးပို့ပါ။ သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာကျိုးပါဝါခလုတ်ကို - ကထိုကဲ့သို့သောလေးနက်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးကြောင့်များသောအားဖြင့်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းတညျ့, နှင့်ဆုံးမပဲ့ပြင်အထူးသဖြင့်နေဆဲအာမခံအောက်ရှိယူနစ်လျှင်, စျေးကြီးမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများထောက်လှမ်းပေါ်မှာဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုဆက်သွယ်တှနျ့ဆုတျဖို့မ သာ. ကောင်း၏။ ပါဝါခလုတ်ကိုနှင့်အတူပြဿနာများအကြောင်းစမတ်ဖုန်းပေါ်မှာချက်ချင်းအိပ်ပျော်ခြင်း mode ကိုဝင်ပါရှိသော်လည်းအနည်းငယ်ကလစ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ပိုပြီးပြောပါလိမ့်မည်။ ပါဝါခလုတ်ကိုနစ်မြုပ်ခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်ကြောင့်အလေးအနက်မြင်နိုင်ချို့ယွင်းချက်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ပယ် / ပေါ်မှာစက်ကိရိယာနှင့်ပထမဦးဆုံးပြဿနာများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ, ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုဆက်သွယ် သာ. ကောင်း၏။
ပြဿနာ 3: အစီအစဉ်ပျက်ကျ
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့သွားရောက်စရာမလိုဘဲ, ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြုပြင်ဖို့တို့သည်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်အရေးပေါ်သင့်ရဲ့ smartphone ကို reboot လုပ်ဖို့သာလိုပါတယ်လုပ်ငန်းစဉ်ပုံစံနှင့်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်မူတည်ပေမယ့်နှစ်ဦးကိုအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်:
ဘက်ထရီဖယ်ရှားရေးနှုန်းထားများ။ သငျသညျကိုသာနောက်ကျောဖုံး devaysa ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဘက်ထရီဆွဲ, ပြီးတော့ပြန်ထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ကတည်းကဒီအလွယ်ကူဆုံး option တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်ပေမယ့်အများဆုံးမော်ဒယ်တစ်ဦးဖြုတ်ဘက်ထရီပစ္စည်းဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းစဉ်နီးပါးအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ပါပြီ။ ကနှင့်အတူမည်သည့်အသုံးပြုသူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ပါလိမ့်;
ခက်ခဲ non-ဖြုတ်ဘက်ထရီရှိသည်သောမော်ဒယ်များနှင့်အတူအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, လုံးဝသင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုချိုးဖျက်ဖို့အန္တာရာယ်သကဲ့သို့, monolithic ခန္ဓာကိုယ် disassemble နှင့်ဘက်ထရီဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားရန်အကြံပြုမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများအဘို့ထုတ်လုပ်သူကစက်ကိရိယာနှင့်ကို bundle လာမယ့်ဆေးထိုးအပ်သို့မဟုတ်ဆေးထိုးအပ်, ကပ်ရန်လိုအပ်သောသည်အဘယ်မှာရှိခန္ဓာကိုယ်အတွက်အထူးအပေါက်, ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
သငျသညျဒုတိယကိစ္စရှိပါကစမတ်ဖုန်းနှင့်အတူကို bundle လာညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်, ထို့နောက်သင်ကအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ရန်ကြိုးစားမတိုင်မီအားလုံးအသေးစိတ်အတွက်အဲဒီမှာခြယ်သထားရပါမည်။ တစ်မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူမှန်ကန်သော connector ကိုရောထွေးဖို့ကြီးမားသောစွန့်စားမှုရှိသည်အတိုင်း, ကိုယ်ခန္ဓာ၌ပထမဦးဆုံးအပေါက်ထဲသို့ဆေးထိုးအပ်ပြီးမှဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့။
ပုံမှန်အားဖြင့်, အရေးပေါ်ပြန်လည်သတ်မှတ်မှုများအတွက်အပေါက်အထက်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းအဆုံးအပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သူကအများစုလည်းအသစ်တခုက SIM ကဒ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဖယ်ရှားသောအထူးပန်းကန်ကဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။
ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအချို့က "ပြည်တွင်းရေး" ဖုန်းအန္တရာယ်လည်းမရှိကြောင့်, ဒီတွင်း၌ကွဲပြားခြားနားသောတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များနှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုတွန်းဖို့အကြံပြုသည်မဟုတ်။ များသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ထုတ်လုပ်သူဟာပလက်တီနမ်ဆင်းမ်ကဒ်-ကတ်များသတ်မှတ်ထားနှင့် / သို့မဟုတ်ပြန်ဖွင့်ဖို့အရေးပေါ် device ကိုအောင်ဖယ်ရှားနိုင်သည့်အထူးကလစ်, တတ်၏။
ပြဿနာ 4: Trouble အားသွင်း socket
ဤသည်ကိုမကြာခဏအချိန်ကြာမြင့်စွာသော device များအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကိုလည်းဘုံပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်ထိုပြဿနာကိုအလွယ်တကူကြိုတင်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်သင်တာဝန်ခံပေါ်တွင်ဖုန်းကိုထား, သူသည်တရားစွဲဆိုမရနိုင်လျှင်, ဥပမာ, အားသွင်းအလွန်နှေးကွေးသောသို့မဟုတ်လှိုင်းထနေသောဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လျှင်, charger ကိုနှင့် charger ကိုသူ့ဟာသူများအတွက်မူရင်း connector ကို၏သမာဓိစစ်ဆေးပါ။ တစ်နေရာရာဝါယာကြိုးများပျက်စီးထိုကဲ့သို့သောကျိုးပဲ့တံသင်အဖြစ်တွေ့ရှိရချို့ယွင်းချက်ဖြစ်လျှင်, က (ပြဿနာကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်) ကို service ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုကို charger ကိုဝယ်ခြင်းငှါအကြံပြုလိုတယ်။
သို့သော်စမတ်ဖုန်းအားသွင်းများအတွက် socket အတွက်ရိုးရှင်းစွာအခြို့သောမြေမှုန့်စုဆောင်းမူလျှင်, ညင်ညင်သာသာသွားတိုက်။ မဟုတ်ရင်သူကတိုက်နယ်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ဖုန်းကိုလုံးဝအလုပ်မလုပ်ကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်, ဒီစက္ကူ, သင်ဝါဂွမ်း swab သို့မဟုတ်ဘီးကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်မည်သည့်ကိစ္စတွင်သူတို့ကရေသို့မဟုတ်နောက်တဖန်အရည်နှင့်အတူစိုစွတ်ကြ၏မရနိုင်ပါ။
တဦးတည်းအရေးပုံရသည်လျှင်ပင်အားသွင်းသည် port အတွက်ချွတ်ယွင်းပြင်ပေးဖို့ကြိုးစားမှပိုင်ဆိုင်လိုအပ်ကြောင်း, မရှိပါ။
ပြဿနာ 5: ဗိုင်းရပ်စ်၏ထိုးဖောက်မှု
အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမရှိသလောက်လုံးဝသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းကိုချယူနိုင်ပေမယ့်အချို့နမူနာယင်း၏ဝန်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ပါ။ သူတို့ကကွာခဏဖြစ်ပေါ်သော်လည်း, သင်သည်သူတို့၏ "ပျော်ရွှင်" ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာလျှင်စမတ်ဖုန်းမှ BIOS ကို analogue မှတဆင့်စက်ရုံတည်ဆောက်မှုလုပ်ဖို့လိုအပ်သောသည်အတိုင်း, ပြီးတော့ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 90% အတွက်, သင်သည်သင်၏ဖုန်းပေါ်မှာရှိသမျှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များနှုတ်ဆက်ပြောနိုင်ပါသည်။ သငျသညျစက်ရုံမှ reset မထားဘူးဆိုရင်, သင်ပုံမှန်အတိုင်းဖုန်းကိုဖွင့်လို့မရပါဘူး။
ကို Android operating system ကို run နေဒီနေ့ရဲ့စမတ်ဖုန်းအများစုများအတွက်အောက်ပါကြေညာချက်ကိုသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လိမ့်မည်:
ပါဝါခလုတ်ကိုနှစ်မျိုးလုံးကိုဆင်း Hold နှင့် volume ၏ထို့အပြင် / အနုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ smartphone ကိုပေါ် မူတည်. volume ကိုသုံးစွဲဖို့အတိအကျထားတဲ့ခလုတ်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ သင်ဖုန်းကိုအဘို့အလက်အပေါ်စာရွက်စာတမ်းများရှိပါကအဲဒီမှာထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်အဘယ်သို့ပြုရမည်အကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားရမည်ခညျြနှောငျသောကွောငျ့, သငျသညျ, ကလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နေသမျှကာလပတ်လုံးစမတ်ဖုန်း (Boot တက် Recovery ကို menu ကိုစတင်သင့်ပါတယ်) အသက်တာ၏အရိပ်လက္ခဏာပြသနိုင်ဖို့စတင်သည်အတိုင်းဤအနေအထားတွင်ခလုတ်ကိုကိုင်ထားပါ။ သငျသညျရှာကိုရွေးပါရန်လိုအပ်ပါတယ်အဆိုပြုထားရွေးချယ်စရာ "Wipe Data / factory reset"သောစက်ရုံတည်ဆောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
မီနူးမွမ်းမံခြင်းနှင့်သင်ရွေးချယ်စရာအသစ်ပစ္စည်းများမြင်လိမ့်မည်။ ကို Select လုပ်ပါ "ဟုတ်ကဲ့ - အားလုံး user data ကို delete"။ ဤအကြောင်းအရာအားရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်သင်၏ဖုန်းပေါ်မှာရှိသမျှ data တွေကိုဖျက်ပစ်ပါ, သင်သာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကို restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
သင် select လုပ်ပါလိမ့်မယ်ရှိရာကနဦးပြန်လည်ထူထောင်ရေး menu ကိုမှပြန် redirected ပါလိမ့်မည် "ယခု Reboot system ကို"။ သင်ဤ option ကိုရှေးခယျြပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဖုန်းကို restart ချလိုက်ပါဦးမည်နှင့်ပြဿနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက်တကယ်ခဲ့လျှင်ဖွင်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ device ကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ထိုးဖောက်မှုမှအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိကြည့်ရှုရန်, မကြာမီမတတျနိုငျသူကဖွင့်ရန်အခါအခိုက်ရှေ့တော်၌မိမိအလုပ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုသတိရပါ။ အောက်ပါ ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ:
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအဆက်မပြတ်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုခုကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ Play ကိုစျေးကွက်ကနေအရာရှိတဦးက update ကိုများနှင့်ပြင်ပရှိသတင်းရင်းမြစ်များမှအချို့ထူးဆန်းတဲ့ဖိုင်တွေမျှမက,
တယ်လီဖုန်းကြော်ငြာနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါ (ပင် Desktop ပေါ်မှာခြင်းနှင့်စံပလီကေးရှင်း) အပြီးအပိုင်ပုံပေါ်ပါတယ်။ တခါတရံသူကမေးခွန်းထုတ်စရာန်ဆောင်မှုမြှင့်တင်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ဒါခေါ်စျေးမှာ-content ကိုရည်ညွှန်းမည်
စမတ်ဖုန်းတွင် (ဒီအမှု၌၎င်းတို့၏တပ်ဆင်ခပင်တစ်စုံတစ်ရာအကြောင်းကြားစာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး) သင့်သဘောတူညီချက်မပါဘဲတချို့ apps များ install လုပ်ထား;
သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသူကနဦး (ထိုလိုဂိုထုတ်လုပ်သူနှင့် / သို့မဟုတ်အန်းဒရွိုက်သည်ထင်ရှား) အသက်တာ၏အရိပ်လက္ခဏာပြသပေမယ့်ပြီးတော့ပိတ်ထား။ တူညီတဲ့ရလဒ်မှဦးဆောင်အလှည့်ပြန်ကြိုးစားမည်။
သင်သည်သင်၏ကိရိယာပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်သိမ်းဆည်းဖို့လိုပါလျှင်, သင်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်တွင်စမတ်ဖုန်းစက်ရုံ settings ကိုသွားစရာမလိုဘဲဖွင့်ခြင်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရနိုင်ပါလိမ့်မည်သောအခွင့်အလမ်းသိသိသာသာတိုးပွားလာနေပါတယ်။ သို့သော် 90% အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့ဒီအမျိုးအစားနှင့်အတူသာအားလုံး parameters များကိုတစ်ဦးအပြည့်အဝဥတုကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
ပြဿနာ 6: Broken ဖန်သားပြင်
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စမတ်ဖုန်းအားလုံးမှန်သည်, ထိုကြောင့်အပေါ်လှည့်ပေမယ်ကြောင့်မျက်နှာပြင်အမိန့်များထဲကရုတ်တရက်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, ပြဿနာဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကကွာခဏဖြစ်ပျက်များနှင့်များသောအားဖြင့်အောက်ပါပြဿနာများအားဖြင့်ရှေ့ပြေးသည်:
ဖုန်းပေါ်မှာမျက်နှာပြင်ရုတ်တရက် "အစင်း" ကိုလုပ်ဆောင်နေသို့မဟုတ်တုန်ခါမှုတွေကိုစတင်နိုင်ခြင်းနေစဉ်;
အရောင်ရုတ်တရက်တစ်ခုလက်ခံနိုင်ဖွယ်အဆင့်အထိ (အသုံးပြုသူကိုပိတ်ထားစစ်မှန်တဲ့သာလြှငျ "အော်တို Brightness ကို" function ကို) အထိပြန်ပြီးတော့ခဏအကြီးအကျယ်ဆုံးကြနှင့်နိုင်ကြောင်းသောအခါ,
စစ်ဆင်ရေးအတွင်းရုတ်တရက်စတင်ခဲ့သို့မဟုတ်လည်းညှိုးနွမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအရောင်တွေ, ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်အသံထွက်တစ် chur ဖြစ်လာခဲ့သည်;
Display ရဲ့နဲ့အတူတစ်ဦးကပြဿနာ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကလုံးဝပြောင်းလဲပစ်ရန် ( ပို. ပို. မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်သော်လည်း) အလုံအလောက်ရသောအခါမြင့်သောဤကဲ့သို့သောအကျင့်ကိုကျင့်၏ကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်လိမ့်မယ်;
ရထားနှင့်အတူအမှား။ တခါတရံကလမ်းကြောင်းပဲကွာရွှေ့ဖို့စတင်သည်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နှင့်ပိုပြီးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်စွဲစေရန်လိုအပ်ပေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်အနိမ့်သည်။ အကယ်. သို့သော်သည် loop တွေနဲ့ပြဿနာတစ်ခုလုပ်ပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ရပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျရုတ်တရက်မရှိတော့အဲဒီမှာကျွမ်းကျင်သူများကသငျသညျကိုကူညီနိုင်သကဲ့သို့, ဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွန့်ဆုတ်နှင့်ဆက်သွယ်မရအကောင်းဆုံးဖုန်းကိုပါဝင်သည်အခါ။ သင့်အနေဖြင့်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်မှတစ်ဆင့် device ကိုထုတ်လုပ်သူကနေဆက်သွယ်ပါရန်ကြိုးစားနိုင်ပါသည်, သို့သော်ထိုသို့ဝန်ဆောင်မှုရန်သင့်အားရည်ညွှန်းဖွယ်ရှိသည်။